Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ဆွေမျိုးတော်ခွင့် ရရပါလို၏
ကိုယ့်ရဲ့ ဖွဘုတ်မှာ မရှိတဲ့ ဆွေမျိုးတွေ အတွက် ဒီမှာ လာတင်ပါတယ်။
အနော့်ကို ပေါဒါရား ခိုနီဒုံ…….
ဒီ နေရာမှာတော့ ဆွေမျိုးမဟုတ်တောင် ဆရာ တပည့် လောက် ဆက်ဆံရေးနဲ့ လိုက်လာပါတယ် လို့။
ဆယ်မိုင်ကုန်းတောစခန်းရိပ်သာမှာ မလေးရှားဆရာတော်နဲ့ ကြုံခဲ့ဖူးတုန်းက ဟောခဲ့တဲ့တရားကလည်း စိတ်ထဲစွဲသွားအောင် သဘောကျခဲ့ဖူးတယ်။
မရဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာ မဂ်ကုသိုလ်၊ ဖိုလ်ကုသိုလ်ပေ့ါ၊ အဲဒါကို ရအောင်ကြိုးစားပါတဲ့။
ဓမ္မဆွေမျိုးတော်ရပါလို၏ ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းကို သဘောကျတယ်။
ကွန်ပြူတာမှာ.. စီပီယူက.. i3, i5, i7 ဆိုသလိုပဲ.. လူဦးနှောက်လည်း.. တွက်ချက်တဲ့စွမ်းရည်တွေကွာတယ်လို့.. ယုံကြည်တယ်…။
-ကွကိုယ် စိတ်ပါတုန်းလေး ပို့စ်ကို ခိုးတင်ပြီး အေးရာအေးကြောင်းနေမလို့ဟာ အဲဒီ ဂျီမလတ် အစဆွဲတော့ ပြန်မန့်ရပြီ။
ဟုတ်တယ် အစ်မဒုံ (သူများခေါ်သလို အလွယ်လိုက်ခေါ်လိုက်ပြီနော်)။ အစ်မဒုံပြောလို့ ဝါတွင်းတော့ ဥပုသ်စောင့်လိုက်အုံးမယ်။ စိတ်အေးချမ်းသာ ရချင်လို့ပေါ့။ အဲ မမြစပဲရိုး အပြောနဲ့ အစ်မဒုံရဲ့ အဖြေ နှစ်ခုကို ဖတ်ပြီးသကာလ ကျွန်မရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကတော့ နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ ထပ်တူမကျသလို မကွဲပြားဘဲ တစ်ချို့အယူအဆက တူပြီး တစ်ချို့အယူအဆက အတော်လေးကို ကွဲပြားစွာခံယူ ထားတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ် ရှင့်….
ဆရာတော်က အပြီးသာ ခေါ်ပေမယ့် အမေစုက အပြီး မလာနိုင်သေးဘူးထင်တယ်နော်… မနောတို့လည်း ဘယ်တော့များမှ ဒီသံသရာဝဋ်ဆင်းရဲက လွတ်မလဲမသိဘူးနော်။
လူယဉ်ပီးမှ ပြောဒယ်လား… ယအူးမဲ ဒီမိုကရေစီ